Kim John Un Oo Tijaabada Gantaalada Cusub Ku Tilmaamay Digniin Ku Socota Koonfurta Kuuriya – HCTV
Ahmed Cige 0	August 7, 2019 11:34 am
Pyongyang, (HCTV) – Madaxweynaha Waqooyiga Korea Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay in gantaaladii ugu dambeeyey ee oo xidhiidh ah ay tijaabisay dalkiisu, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay yihiin digniin uu u dirayo Koonfurta Kuriya iyo Milatariga dalka Maraykanka.
Warbaahinta dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa ku warantay maanta oo arbaca ah war-saxaafadeed uu soo saaray in ridida gantaaladani ay yihiin kuwo nooc cusub ah oo socon doona mid 12 cisho oo xidhiidh ah.
“Kim Jong Un wuxuu xusey in tallaabada millatari ay noqon doonto talaabo loogu digayo oo digniin ku filan ah hawlgallada militari ee wadajirka ah ee ay hadda wadaan maamulka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed,” ayuu yidhi KCNA.
Hawl galada ayaa imanaya inkastoo Pyongyang ay ka digtay in layliyada ay samaynayaan Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya ay carqalad ku noqon doonaan wadahadalada Nukliyeerka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Tokyo Arbacadii, Xoghayaha Difaaca Maraykanka Mark Esper wuxuu la kulmay dhiggiisa Japan, Takeshi Iwaya, si ay uga wada hadlaan horumarkii ugu dambeeyay ee Waqooyiga Kuuriya, iyo sidoo kale xiisadaha ka jira Badda Koonfurta Shiinaha.
Esper wuxuu booqday Australia iyo New Zealand ka hor intaysan imaanin Japan. Wuxuu u safri doonaa Mongolia iyo South Korea inta lagu guda jiro qaybta dambe ee safarkiisa Aasiya.
Talaadadii, Pyongyang waxay duqeysay laba gantaal oo “loo malaynayo inay yihiin gantaalaha gaagaaban oo gaagaaban” badda dhexdeeda, hogaaniyaasha Wadajirka ee Kuuriyada Koonfureed (JCS) ayaa horaan sheegay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa usbuucii hore beeniyey soo bandhigida Kuuriyada Woqooyi isagoo ku tilmaamay “mid aad u caadi ah”, isagoo intaa ku daray in Kim uusan dooneynin inuu “niyad jabiyo” isaga.
Trump iyo Kim waxay ku qabteen shir taariikhi ah Singapore sanadkii la soo dhaafay, halkaas oo Kuuriyada Woqooyi ay ballanqaad aan kala go ’lahayn ka gaarnay diidmada.